Garoowe: Sanad Guuradii 52-aad Ee Kasoo Wareegtey Asaaskii Ciidanka Xoogga Dalka Oo La Xusay [Cod+Sawiro] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Garoowe: Sanad Guuradii 52-aad Ee Kasoo Wareegtey Asaaskii Ciidanka Xoogga Dalka Oo La Xusay [Cod+Sawiro]
Garoowe: Sanad Guuradii 52-aad Ee Kasoo Wareegtey Asaaskii Ciidanka Xoogga Dalka Oo La Xusay [Cod+Sawiro]
April 12, 2012 - By: Moha Salat
Munaasabad lagu xusayey sanad guuradii 52-aad ee kasoo wareegtay asaaskii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday xerada 54-aad ee magaalada Garoowe.
Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimey waxaa kasoo qayb galay mas’uuliyiinta ugu sareeya dowladda oo uu ugu horeeyo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole.
Sidoo kale waxaa munaasabadaas kasoo qayb galay mas’uuliyiin kale oo ay ku jiraan madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabisamed Cali Shire, Taliyaha ciidamada Daraawiishta Siciid dheere, mas’uuliyin ka tirsan golaha wasiirada, Baarlamaanka iyo madaxda laamaha kala duwan ee ammaanka.
Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo goobtaas ciidamada kula hadlay ayaa ugu hanbalyeeyey howsha ay dalka iyo dadka u hayaan isagoo ku booriyey in mar walba difaaca dalka heegan ugu jiraan.
Dr Faroole waxa kale oo uu xusay in maanta ay tahay maalin isaga qiiro gaar ah gelineysa maadaama ay soo xusuusineyso sidii ay ciidamadii xoogga dalka ee Soomaaliya ahaan jireen xiligii ay Soomaaliya qaranka awoodda leh ahayd.
Dhegeyso codka Madaxweynaha
Sareeye Gaas Siciid Maxamed Xirsi (Siciid Dheere) oo ah taliyaha ciidamada Daraawiishta ee Puntland oo isna munaasabadaas ka hadlay ayaa ka warbixiyey heerarkii kala duwanaa ee ay ciidamada xoogga dalku soo mareen.
Dhegeyso Codka Taliyaha Ciidamada Daraawiishta
Guutooyin ka tirsan ciidamada Daraawiishta ayaa gaada ka cayaar ku sameeyey gudaha xerada iyagoo salaan sharaf u saaray mas’uuliyiintii goobta joogey ee uu madaxweynaha Puntland kamid ahaa.
Dhegeyso Codka Astaanta Qaranka iyo Salaantii Ciidamada Ee Madaxda
Maanta oo ah 12-April ee sanadka 2012 waxay ku beegan tahay 52-sano guuradii kasoo wareegtey xiligii dhidibada loo taagey ciidan xooggan oo uu dalka Soomaaliya yeesho. munaasabad taas lamid ah ayaa sidoo kale maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.